Myanmar Islamic Religious Organization sendsaformal demand letter to the President for proceedings against the Aung Jeyatu Journal that has committed Religious Offense | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး အသုံးချရင် ဝင်မစွက်ဘူးလား
Government abetted publications (that) insult Islam and Prophet in Burma »
This entry was posted on October 23, 2014 at 10:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Myanmar Islamic Religious Organization sendsaformal demand letter to the President for proceedings against the Aung Jeyatu Journal that has committed Religious Offense”
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်အား အရေးယူပေးရန် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ကသမ္မတထံ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တုိုင်ကြားစာပုို့
အောက်တုိုဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၄
ဘာသာရေးစော်ကားမှု၊စိတ်နာကျည်းစေမှု၊ အစ္စလာမ်သာသာနာတော်အားမဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ရေးသားမှုများနှင့် တရားဥပဒေစုိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေသည့်အရေးအသားများကိုရေးသားဖြန့်ချိနေသည့် အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်အား တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူတားမြစ်ပေးပါရန် မြန်မာန်ိင်ငံလုံးဆုိုင်ရာအစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးက ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်ပါ ရက်စွဲဖြင့် တုိုင်ကြားစာပေးပို့လိုက်သည်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ် ၄၄ တွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုဂျာနယ် အောင်ဇေယျတုက ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာစော်ကားရေးသားခဲ့မှုအား ရည်ညွန်းကာ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ၅ ဖွဲ့က အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်အားအရေးယူတားမြစ်ပေးရန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တုိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် စတင်ထွက်ရှိပြီးမကြာမြင့်မှီ ဂျာနယ်အမှတ် (၇)တွင်လည်း မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစာပေရေးသားသူ မောင်သွေးချွန်ရေးသားသည့် အစ္စလာမ်ဗိုင်းရပ်စ်နိဒါန်း ၊ မောင်သွေးချွန် အယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဇမ္ဗူဒိပ်ဂျာနယ် အမှတ် (၅၅)ပါ ရဲသူရိန်မင်းဘာသာပြန်သည့် ကြောက်စရာအစ္စလာမ်ဗိုင်းရပ်စ် ဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးယူတားမြစ်ပေးပါရန်တုိုင်ကြားစာတစ်ရပ်ကိုလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ မြန်မာနိင်ငံလုံးဆုိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့ က န်ိင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြခဲ့ဖူးသည်။
အထက်ပါအတုိုင်းန်ိင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြခဲ့သော်လည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန က မြန်မာန်ိင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က ကျင့်ဝတ်အရထိန်းသိမ်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးစေလိုကြောင်း သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်အသိပေးခဲ့သော်လည်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)အနေဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့များထံသို့ တစ်စုံတရာပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်း “လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိခဲ့ကြောင်း” မ.အ.ဖ အဖွဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ခင် နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် ဥက္ကဌ ဦးညွန့်မောင်သျှိန် တို့က Myanmar Muslim Media သို့အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“အရေးယူမှလည်းထိရောက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျာ။အရေးမယူဘူးဆုိုရင်တော့ကျွန်တော်တုို့တင်တာကအလကားပဲပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဖြစ်တန်တဲ့အခြေအနေအရ အရေးယူလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ”ဟု အစ္စလာမ်သာသာနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် ဥက္ကဌ ဦးညွန့်မောင်သျှိန်က သုံးသပ်သည်။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာန်ိင်ငံတော် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်အစည်းအဝေးတွင်လည်း တင်ပြဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးညွန့်မောင်သျှိန်က ပြောသည်။
[…] Myanmar Islamic Religious Organization sendsaformal demand letter to the President for proceedings… […]